‘ए मेरो हजुर ३’ चल्नै पर्ने सात कारण – An Online Entertainment News Portal
Homeblog‘ए मेरो हजुर ३’ चल्नै पर्ने सात कारण
‘ए मेरो हजुर ३’ चल्नै पर्ने सात कारण
April 10, 2019 Dipendra Ghimire blog, Entertainment, Feature News, News 0
दिपेन्द्र घिमिरे (सुत्रइन्टरटेनमेन्ट) – चैत्र २९ गते शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ प्रतिक्षित मानिएको छ । नायिका तथा निर्देशक झरना थापाको निर्देशन रहेको फिल्म सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् । युवा स्टार अनमोल केसी र डेब्यु नायिका सुहाना थापाको साथमा सलोन बस्नेत, रेअर राई, सरोज खनाल लगायतको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म साङ्गितिक प्रेम कथामा आधारित रहेको छ । स्टार गायक र उसको फ्यानको कथा समेटिएको फिल्म चल्नु पर्ने विविध कारण होलान् । हामी यहाँँ ए मेरो हजुर ३ चल्नु पर्ने सात कारणहरुको चर्चा गर्दैछौँ :
१. झरना थापा
फिल्म अभिनयमा केही समयको ग्याप पछी झरना थापा एक्कासी निर्देशनमा होमिइन् । उनको डेब्यु निर्देशन रहेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ व्यापारिक रुपमा सफल सावित भयो । त्यही फिल्मले दिएको सफलता पछाउँदै उनले दोश्रो फिल्मको रुपमा ‘ए मेरो हजुर ३’ निर्देशन गरिन् । डेब्यु महिला निर्देशकको रुपमा उनले आफ्नो दरिलो उपस्थिती नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रस्तुत गरिन् । पहिलो फिल्म नै ब्लकबस्टर दिएकी उनलाई चुनौती छ आफ्नो डेब्यु निर्देशनले दिएको साख जोगाउनका लागी । अर्को पाटोमा उनले यसै फिल्म मार्फत आफ्नी छोरी सुहाना थापालाई फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गराएकी छिन् । डेब्यु फिल्ममा नै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पछिल्लो समय नम्बर १ भनिएका युवा स्टार अनमोल केसीसंग छोरीको जोडी बाँधिदिएकी छिन् । उनी माथि यो अर्को चुनौती हो छोरीलाई छायाँमा पर्न नदिने । झरना थापाका लागी यही चुनौती पार गर्न ए मेरो हजुर ३ चल्नु पर्छ ।
२. अनमोल केसी
अनमोलको पछिल्लो प्रदर्शन भएको फिल्म क्याप्टेन व्यवसायिक रुपमा त्यती सफल हुन सकेन । फुटवल खेलाडीको रुपमा फिल्ममा प्रस्तुत भएका अनमोललाई दर्शकले अनमोल भएकै कारण साथ दिए होला तर उनको ‘निशान खड्का’ क्यारेक्टरले चर्चा पाउन सकेन । क्याप्टेन हेरे पछि धेरैले अनमोललाई स्टार वाला फ्रेम नै उचित भएको विश्लेषण गरे । ए मेरो हजुर ३ मार्फत अनमोल आफ्नो पुरानै फर्ममा फर्किने आशा गरिएको छ । धेरैको यो सोच र आशालाई सही सावित गर्न पनि ए मेरो हजुर ३ चल्नु पर्छ ।
३. सुहाना थापा
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा झरना थापाको योगदानको मुल्यांकन सम्पूर्ण फिल्मकर्मीले गरेकै होलान् । विवाहित भएपछी नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सकृय हुने थोरै फिल्मकर्मी मध्य अग्र स्थानमा आउने नाम हो झरना थापा । आज उनले आफ्नी छोरीलाई फिल्म क्षेत्रमा होमेकी छिन् । फिल्म क्षेत्रले आमालाई दिएको साथ र सम्मान जोगाउनु भन्दा ठुलो चुनौती सुहानाका लागी अरु हुन नसक्ला । सुहानाले त्यही चुनौती पार गर्नका लागी पनि ए मेरो हजुर ३ चल्नु पर्छ ।
४. मेगास्टारको ट्याग
कुनै पनि कलाकारलाई कुनै पनि ब्यानरले दिएको पहिलो ट्याग हो ‘मेगास्टार’ । जुन ए मेरो हजुर ३ मा अनमोल केसीलाई दिइएको छ । फिल्मका सार्वजनिक हरेक सामाग्रीमा अनमोललाई ‘मेगास्टार अनमोल केसी’को ट्याग दिइएको छ । अनमोल आफैँले त्यो ट्याग थेग्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यसको लेखाजोखा फिल्म रिलिज र त्यसको व्यवसायिकताले प्रस्टाउने छ । मेगास्टारको ट्याग दिने ब्यानर सुहाना इन्टरटेनमेन्ट र ट्याग पाएका अनमोल केसी दुवैका लागी मेगास्टारको पदवी सच्चा सावित गर्न पनि ए मेरो हजुर ३ चल्नु पर्छ ।
५.अनमोल र सुहानाको चर्चा
पछिल्लो समय नेपाली मिडिया र आम जनमानसमा युवा स्टार अनमोल केसी र डेब्यु नायिका सुहाना थापाको चर्चा चुलिएको छ । उनीहरुले पाएको चर्चाले उनीहरु माथी फिल्म चल्नुपर्ने दवाव छ । सुहाना र अनमोलले पाएको यो चर्चा छापा र अनलाईन मिडियामा मात्र होइन नेपाली फिल्मका दर्शक बिच पनि हो भन्ने सावित गर्न पनि यो फिल्म चल्नै पर्छ । त्यो तव सावित हुन्छ जव उनीहरुको जोडीलाई रुचाएका दर्शक फिल्म हेर्न हलसम्म आउँछन् ।
६. निर्माता जोगाइराख्न
पछिल्लो समय नेपाली फिल्म क्षेत्रमा धेरै नयाँ निर्माता आए र गए । फिल्ममा गरेको लगानी खहरेको भेल सावित भएपछी ति निर्माता कहाँ पुगे खोजीनिती कसैले गरेनन् । पुराना निर्माता सुनिल कुमार थापा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा निरन्तर सकृय छन् । उनले निरन्तर फिल्म निर्माण गरिरहेका छन् । निरन्तर फिल्म निर्माणमा सकृय थापा जस्ता निर्माता बचाइराख्न पनि ए मेरो हजुर ३ चल्नु पर्छ ।
७. फ्लपको शृंखला अन्त्य गर्न
पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका कुनै पनि फिल्म व्यवसायिक रुपमा सफल छैनन् । करिब १००को हाराहारीमा यस बर्ष सार्वजनिक भएका फिल्महरुमा २ फिल्मले मात्र नाफा कमाएको फिल्मकर्मीको भनाई छ । बर्षको अन्तिममा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको ए मेरो हजुर ३ लाई निरन्तरको फ्लप फिल्मको शृंखला तोड्नु पर्ने दवाव पनि छ ।
प्रकाश र अन्जलीको ‘खोलीमा माछी’
‘ए मेरो हजुर ३’ शिर्ष गीत सार्वजनिक